Mmetụta na mmetụta nke mmadụ
Maka anyị, okwu "mmetụta" na "mmetụta" dịka otu echiche - ihe anyị nwere n'ime. Ma, n'eziokwu, mmetụta dị mgbagwoju anya na mmetụta nke onye mmadụ bụ nanị ihe na-egosi amaghị agụ, n'ihi na n'etiti okwu ndị a, ọ dị mfe ịdọrọ eriri.
Kedu ihe dị iche n'etiti mmetụta na mmetụta uche?
Ngosipụta nke ọdịiche dị iche iche nke mmetụta site na mmetụta uche ga-amalite site na nkọwa onwe ha. Ya mere, mmetụta bụ ngosipụta onwe onye banyere àgwà mmadụ na gburugburu ebe obibi. Na mmetụta uche bụ nyocha nke ọnọdụ ahụ. Ogologo a dị ogologo, na atụmatụ ahụ dị mkpirikpi. N'ihi ya, ọdịiche mbụ bụ oge dị irè.
N'okwu nke okwu, mmetụta na mmetụta uche dị iche. Anyị na-ama mgbe niile banyere mmetụta anyị ma nwee ike inye ha nkọwa - ịhụnanya, ịkpọasị, obi ụtọ, mpako, anyaụfụ, wdg. Ma mmetụta uche anyị na-ekwupụta na ọ dị nro. Mgbe ị na - ekwu na ị "na - agbọ ụbụrụ" ugbu a, gịnị ka i chere? Iwe, iwe, ike ọgwụgwụ bụ mmetụta niile.
A na-egosipụta mmetụta site na mmetụta uche. Ha na-edo onwe ha n'okpuru, mana dabere na ọnọdụ ị nọ. Dịka ọmụmaatụ, ịhụnanya (mmetụta) ị na-enwe n'ebe nwa okorobịa gị nọ, n'oge esemokwu nwere ike igosipụta oke iwe, iwe, iwe (mmetụta). Mmetụta bụ ihe na-eme ebe a ugbu a. Mmetụta dị iche iche na-adịgide adịgide. Ọ bụrụ na mmetụta na-ekewapụ ihe dị na ọnọdụ, mgbe ahụ mmetụta uche na-eme ka ọnọdụ ahụ dum dị.
Mmetụta na mmetụta dị n'etiti ndị ikom na ndị inyom
Ihe kacha adọrọ mmasị bụ na ụdị dịgasị iche iche nke mmetụta uche na mmetụta dị iche iche. Ihe kpatara ya bụ na iche iche nwoke na nwaanyị nwere ụdị mmetụta dị iche. Ya mere, umunwanyi bu ihe ngosi nke ihe nwute, egwu, na ndi mmadu na-ekwusi iwe ike.
Otú ọ dị, ndị ọkachamara na-ekwu na ike nke mmetụta uche na mmetụta ndị nwere adịghị enwe mmekọahụ, ọ bụ nanị ọdịiche dị na ngosipụta ha. Na ihe nile, n'ihi na site na mụọ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-ebulite ịrụ ọrụ dị iche iche na-elekọta mmadụ. Ụmụntakịrị na-amụta iji kwụsị egwu na mwute, ụmụ nwanyị na-ebelata iwe. Ma maka mmetụta ikpeazụ, a gosipụtara na ihe dị ka afọ 1 site n'oge a mụrụ nwa, iwe dị na ụmụ ọhụrụ ka egosiri.
Ọjọọ ọjọọ n'enweghị ihe kpatara ya
Esi ewepu mpako?
Kedu esi achọta ndị enyi na ndụ?
Nsogbu nke etiti oge ụmụ nwanyị na ndị nwoke - esi enweta ndụ?
Ostracism na nke oge a - gini bu ya?
Ụdị Turquoise na ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ
Hypnotherapy - ihe kachasị mkpa nke usoro, ozizi, ọzụzụ, akwụkwọ, usoro, olee otu nnọkọ ahụ?
Kedu otu esi eme onwe gị obi ụtọ ma ọ bụrụ na ihe niile dị njọ?
Olee otú iji lanarị aghụghọ?
Sensualism - uru na nkwenye nke sensory cognition
Olee otú obi dị iche na mmetụta uche?
Dyslexia - gini bu ya, ama ama ndi mmadu nwere nsogbu dyslexia
Rivanol maka iwepụ ntutu
Astigmatism - ọgwụgwọ
Pornstar Brett Rossi gbara akwụkwọ megide Charlie Sheen
Ihe ngwọta Lugol na glycerin - ngwa
Oge - bara uru na ala na contraindications
Esi tufuo goosebumps?
Mbadamba ụrọ Valtrex
Nwepụ ntutu na eri
A ghọtara ụdị mmadụ asaa a na-enwe mmekọahụ dị ka ihe kasị dị ize ndụ!
Uwe na-egbuke egbuke
Meghee achicha na jam
Nri dị mma ma dị mma na ugu
Nicknames maka nkịta ụmụ chihuahua
Kedu ka Chihuahua si abanye n'ụlọ mposi?
Ntak emi mîdịgheke n̄kpri n̄kọbọk?
Eji kichin kichin
Kedu otu esi eji blender?